Wefti Ka Socday Rugta Ganacsatada Somaliland Oo Iskaga Baxay Shirkii Dalka Turkiga+Sababta |
Wefti Ka Socday Rugta Ganacsatada Somaliland Oo Iskaga Baxay Shirkii Dalka Turkiga+Sababta
Wefti ka socday dalka Jamhuuriyadda Somaliland oo uu hoggaaminayay guddoomiye-xigeenka rugta ganacsiga Somaliland Md. Jamaal Caydiid Ibraahim oo ka tirsan ganacsatada Somaliland, ayaa diiday inay ka qayb galaan shirka loogu magac daray shirka Heerka Sare ee Soomaaliya iyo beesha caalamka ee bahwadaagta la ah, kaas oo ku qabsoomay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Md. Jamaal Caydiid oo isagoo ku sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, u waramay wargeyska Geeska Afrika, ayaa sheegay in dawladda Turkigu rugta ganacsiga iyo ganacsatada Somaliland ku casuuntay inay shirka kaga qayb geli doonaan magaca Jamhuuriyadda Somaliland islamarkaana ay ku jiraan ajandaha shirka kana jeedin doonaan khudbado. Hase yeeshee wuxuu sheegay in qorshihii is bedelay, sidaas darteedna ay go’aansadeen inaanay shirka ka qayb gelin, “Turkigu wuxuu nagu casuumay inaanu ajandaha wax ku leenahay oo aanu ka hadli doono, doodayadana soo bandhigi doono, laakiin markii aanu aragnay in aanaan ajandaha ku jirin shirkuna ahaa mid muddo soo socday oo aanaan reer Somaliland ahaan waxba ku lahayn, waxaanu go’aansanayn in aanaan ka qayb gelin. Sidaas ayaanan shirkii kaga joogsanay.” ayuu yidhi Jamaal Caydiid.
Jamaal Caydiid, wuxuu Geeska Afrika u sheegay in isaga iyo ganacsatada Somalilandba ay sidaas kaga baaqdeen shirkii, islamarkaana ay ka dhego adaygeen codsiyo badan oo ay dawladda Turkigu kaga dalbatay inaanay shirka qaadicin.
XIGASHO WERGEYSKA GEESKA AFRICA